किन छाडिन चर्चित भिजे सोनिका रोकायाले नेपाल ? ( हेर्नुहोस भिडियो सहित ) - Entertainment Khabar
किन छाडिन चर्चित भिजे सोनिका रोकायाले नेपाल ? ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन २६, २०७५ समय: ८:०१:२५
काठमान्डाँै , असोज २६
चर्चित युटुव च्यानल बाउ नेपाली सञ्चालिका तथा भिजे सोनिका रोकायाले अन्तत नेपाल छोडेकी छन । बाल्यकालदेखी नै समाज परिवर्तनका लागी आफैले केही गर्नुपर्छ भनेर ग्ल्यामर क्षेत्रमा आबद्द रहदै हुनुपर्छ भन्ने विचारमा थिइन । बूढानीलण्ठ स्कुलबाट विद्यालय शिक्षा पूरा गरेकी सोनिकाको परिवारको इच्छा डाक्टर, इन्जिनियर बनाउनमै थियो ।
यद्यपि, परिवारको इच्छा विपरीत नै विज्ञान विषयको अध्ययन छाडेर पत्रकारितामा प्लस टु गरेकी सोनिकाको रहर नेपाली चलचित्रमा नै स्थापित बनिरहेको अवस्थामा उनी नेपाल बाट टाडा भएकी छन । बर्तमान समयले आफुले गरेको सकारात्मक कामलाई अधिकाशले विरोध गरेको कारण निकै तनावमा भएका कारण देश छाडेको बताइन ।
उनले हामीले सकारात्मक काम गर्नेलाई खुटटा तान्ने प्रबृति हावी भएको कारण निकै दुखी भएको बताइन । उनले आफनो विगत र वर्तमान सम्म धेरैले साथ दिएको कारण आजको सफलतामा रहेको पनि बताइन । उनले आफुले गरेको सकारात्मक कामलाई नकारात्मक तवरबाट ब्याख्या गरेको समेत बताइन ।